शिक्षा/स्वास्थ्य – Page5– Nepal Parikrama
स्टनिङ एजुकेशनले पुतली सडकमा आफ्नो पहिलो शाखा विस्तार गर्‍यो
काठमाडौं– स्टनिङ एजुकेशन फाउण्डेशन एण्ड आइटी सोलुशनले काठमाडौंको मुटु पुतली सडकमा आफ्नो पहिलो शाखा विस्तार गरेको छ । काठमाडौं चावहिलको सफलतापछि यस फाउण्डेशन आफ्नो शाखा पुतली सडकमा पनि विस्तार गरेको हो । आधा दशकदेखि काठमाडौंको चावहिल बौद्ध स्तुपाको ठीक अपोजिट रहेर सेवा दिइरहेको यस संस्थाले आफूलाई व्यापक बनाउन शाखा विस्तार गरेको संस्था सिइओ विजय कुमार गुप्ताले जानकारी दिनुभयो । आइलटेस्ट, टोफेल सा
ललितपुर–नेपाल क्यान्सर हस्पिटल तथा रिसर्च सेन्टरले थालेसिमिया रोगबारे सर्वसाधारणलाई जानकारी दिन जनचेतनामूलक कार्यक्रम गरेको छ । हस्पिटले सम्बन्धित क्षेत्रका विज्ञहरूको सहभागीतामा शनिबार थालेसिमिया सम्बन्धी जनचेतनामूलक कार्यक्रम गरेको हो । कार्यक्रमा थालेसिमिया रोगबारे जानकार विशेषज्ञ डाक्टर, थालेसिमियाका विरामी, तिनका अभिवाहक र सञ्चारकर्मीको सहभागीता थियो । कार्यक्रम लोमो समयदेखि थालेसिमियाको क
धुँवा र धूलोको साम्राज्य भित्र काठमाडौं उपत्यका, सर्वसाधारणको स्वास्थ्य माथि खेलवाड
काठमाडौं–काठमाडौं उपत्यका अहिले धूवाँ धूलोको साम्राज्य भित्र छ । उपत्यकाको चारैतिर चलेको सडक विस्तारको कछुवा गतिमा हुँदा यसले सर्वसाधारण स्वास्थ्यमा प्रत्यक्ष असर गरेको छ । विकास निर्माणको काम हुनु आफैमा सहरानीय पक्ष हो तर त्यसले बर्षौसम्म नागरिकको स्वास्थ्यमा खेलवाड गर्नुभनको चाँहि गतल हो । नेपालको संविधान २०७२ को धारा ३० को उपधारा १ मा प्रत्येक नागरिकलाई स्वच्छ र स्वस्थ वातावरणमा बाँच्न पाउने हक
रामसुन्दर आचार्य–काभ्रे । काभ्रेका भूकम्पपीडितले गैर सरकारी निकायबाट आवस लागि पाएको आश्वसन केवल आश्वसनमै सिमित भएको छ । २०७२ साल बैशाख १२ गते आएको विनासकारी भूकम्प कारण बस्ने बासको कुनै जगजिलो नरहेका भूकम्प पीडितहरुका लागि सरकारी निकायबाट पनि भएको प्रतिबद्धता अनुसारको काम हुन सकेको छैन् । काभ्रे जिल्लामा ६७ हजार ७ सय ११ परिवारको नाम भूकम्प पीडितको लाभग्राही सूचीमा परेका छन् । जसमध्ये ६० हजार प
काठमाडौं–मंसिर । काभ्रेको दाप्चा काशिखण्ड नगरपालिका वडा नम्बर ११ स्थायी घर भएका ६ वर्षीय मनिष नेपाली जन्मदेखि नै थालसेमिया(शरीरमा रगत उत्पादन नहुने) रोग बाट पीडित छन् । हाल काठमाडौंस्थित् कान्ति बाल अस्पतालमा उपचाररत यी बालकको उपचार खर्चीलो भएपछि परिवारले सहयोगको अपिल गरेको छ । आर्थिक स्थिति अत्यन्तै नाजुक रहेका कारण उपचार नेपालमा सम्भव नभएपछि सहयोगको अपिल गर्नपरेको बालकका बाबु रामचन्द्र नेपालीले
केसीको समर्थन सरकारी स्वास्थ्य सेवा ठप्प
मंसिर । चिकित्सा क्षेत्र सुधारको माग गर्दै अनसनरत डा. गोविन्द केसीको समर्थनमा शुक्रबार मकवानपुरका सवै स्वास्थ्य संस्थामा आकस्मिक बाहेकका सेवा ठप्प भएका छन् । जिल्ला अस्पताल, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, नीजि अस्पताल र क्लिनिकहरुले स्वास्थ्य सेवा ठप्प पारेका हुन् । डा. केसीको जीवन रक्षाको माग गर्दै चिकित्सक एवं स्वास्थ्यकर्मी आन्दोलनमा उत्रिएपछि सेवा ठप्प भएको हो । चिकित्सक र स्वास्थ्यकर्मीले हातमा
काठमाडौं–मंसिर । पन्ध्र दिनदेखि निरन्तर असनमा रहनुभएका डा. केसीको स्वास्थ्य अवस्था नाजुक बन्दै गएको छ । डाक्टर गोविन्द केसी विभिन्न १० बुँदे माग राख्दै दशौं पटक असनमा बसेको आइतबार १५ दिन पूरा भइसकेको छ । आइओमको डीन बरिष्ठताका आधारमा नियुक्त गर्नुपर्ने, त्रिविका उपकुलपति तीर्थ खनियाँलाई बर्खास्त गर्नुेपर्ने, एमवीवीसको शुल्क गत बर्ष नै तोकिएको हुनुपर्ने, आइओमलाई पूर्ण रूपमा स्वतन्त्र बनाउनुपर्ने लगा
काठमाडौं–मंसिर । राष्ट्र भाषा विकास गर्न माध्यमिक तहमा हाल लागु गरिएको पाठ्यक्रमलाई परिमार्जित गर्नुपर्नेमा सरोकारवाला पक्षले ध्यानाकर्षण गराएको छ । काठमाडौंमा आयोजित कार्यक्रममा उनीहरुले राष्ट्र भाषा संकटमा परेको भन्दै पाठ्यक्रमलाई आवश्यकता अनुसार सुधार गरी भाषा संरक्षण गर्नुपर्नेमा जोड दिए । नेपालभाषा, मैथिलि, तामाङ, भोजपुरी लगायतका राष्ट्र भाषालाई माध्यमिक तहमा गणित विषयसाग ऐच्छिक बनाइएकोमा उ
कार्यशैलीमा परिवर्तन नभएसम्म परिवर्तन हुन्न : मन्त्री थापा
काठमाडौं–मसिर । स्वास्थ्य मन्त्री सरकारका निकायले आफ्नो कार्यशैलीमा परिवर्तन गर्न नसकेसम्म जनताले चाहेको परिवर्तन अनुभूत हुन नसक्ने बताउनुभएको छ । स्वास्थ्य सेवा विभागको वार्षिक प्रगति समिक्षा कार्यक्रममा मन्त्री थापाले संविधानको कार्यान्वयनको बेला भएकाले कार्यशैली र व्यवहारमा परिवर्तन गर्न नसके जनअपेक्षा अनुसार काम हुन नसक्ने बताउनुभएको हो । थापाले स्वास्थ्य उपचार पाउनुलाई मौलिक हकको रूपमा संविध
सबै खाले क्यान्सर रोगको उपचार नेपालमै सम्भव छ
काठमाडौं–कार्तिक । आइतबार बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले नेपाली कांग्रेस नेतृ सुजता कोइरालाई स्वास्थ्य उपचार खर्च भन्दै ५० लाख दिने निर्णय गर्‍यो । यति नै बेला कांग्रेसबाटै स्वास्थ्य मन्त्री बनेका गगन थापाले विशिष्ट व्यक्तिको उपचार खर्चको नाममा हुँदै आएको खर्चलाई सिमित गर्ने योजना अगाडि बढाई रहेका छन् । स्वास्थ्य मन्त्रालयले मेडिकल सिफारिसका आधारमा विशिष्ट व्यक्तिलाई उपचारका लागि बढीमा १५ लाख रुपै